Malaayiin ciraaqiyiin ah oo laga cabsi qabo in ay ka bara kacaan magaalada Mousil – The Voice of Northeastern Kenya
Malaayiin ciraaqiyiin ah oo laga cabsi qabo in ay ka bara kacaan magaalada Mousil
Ilaa 1 million oo ruux ayey suurta gal tahay in ay magaalada Mousil ee dalka Ciraaq uga bara kacaan cabsi ay ka qabaan waxyeello kasoo gaarta dagaal ay dowladda Ciraaq ku dooneyso in ay dib ugu qabsato magaaladaasi.
Hay’adda laanqeyrta cas oo arrintaan sheegtay ayaa walaac xoogan ka muujusay xaaladda bani aadanimo ee soo food saareysa shacabka ku dhaqan magaalada Mousil oo ay qaarkood hadda billaabeen in ay guryohooda ka cararaan.
Waxaa sii xoogeysanaya dagaalka ay ciidamada dowladda Ciraaq kula jiraan xoogaga kooxda la magac baxday dowladda Islaamka ee ISIL, iyagoo hadda doonaya in ay iskuucyada soo socda dib gacanta dowladda ugu soo celiyaan Mousil oo ay hadda maamulaan dagaalyahannada kooxda Daacish.
Isbuucaan gudihiisa oo kaliya ayaa waxa ay in ka badan 3,000 oo qof ka bara kaceen degmada Shirqat oo ku taalla koonfurta magaalada Mousil.
Wixii ka dambeeyay markii ay ciidamada dowladda Ciraaq iyo xulafadooda bishii lasoo dhaafay la wareegeen magaalafa Faluja waxaa socday howlgallo loogu diyaar garoobayay in lagu weeraro magaalada Mousil oo si aad ah istiratiiji ugu ah kooxda ISIL.
Mousil ayaa gacanta kooxdaasi hubeysan ku jirtay tan iyo bishii June ee sanadkii 2014-ki, iyagoo ka hela dhaqaalaha ugu badan ee ay howlohooda ku maareeyaan, maadaama ay Mousil tahay mid ka mid ah magaalooyinka laga soo saaro shidaalka ugu badan ee dalka Ciraaq.
← Laba qof oo lala xiriirinyo kooxda Alshabaab oo Maxkamada kasoo hurmuqday
Wasiirada Arimaha Dibadda oo Baaq u dirtay Beesha Caalamka →
1 thought on “Malaayiin ciraaqiyiin ah oo laga cabsi qabo in ay ka bara kacaan magaalada Mousil”
shacabka ciraaq waligooda kama baxayaan barakac wayo dawladodi abowda lahayd waa laburburiyey isis na waa mashaaric loga talo galey barakiciinta